Okufanele ukwenze uma i-Mac yakho ingaboni i-hard drive yangaphandle | Ngivela kwa-mac
Okufanele ukwenze uma i-Mac yakho ingaboni i-hard drive yangaphandle
Ngabe uxhuma idrayivu yesitoreji sangaphandle kwi-Mac yakho futhi ayiyiboni? Kungenzeka ukuthi ngezinye zezixazululo esikunikeza zona, inkinga izonyamalala. Manje, kungenzeka kakhulu ukuthi akukho neyodwa yazo esebenzayo futhi unenkinga ngamachweba wokunweba ekhompyutha yakho noma ukuthi indawo yokugcina ayilungile. Sizozama ukukunikeza izixazululo eziningana; ezinye zazo zilula kakhulu, kepha kunezikhathi lapho okusobala kakhulu kuyinto yokuqala esiyilahlayo. Uma uxhuma i-hard drive noma imemori ye-USB kwi-Mac yakho futhi kungenzeki lutho, izixazululo zingaba ngale ndlela elandelayo.
1 Ikhebula le-USB alisebenzi kahle
2 Awunakho ukuboniswa kwamadrayivu angaphandle ku-Finder okunikwe amandla
3 Setha kabusha iSystem Management Control (SMC)
3.1 Ama-laptops e-MacBook (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) ngaphandle kwebhethri elikhishwayo:
3.2 Ama-desktops afana ne-iMac, Mac Mini, Mac Pro:
3.3 iMac Pro (izinyathelo ezahlukahlukene kwi-iMac ejwayelekile):
Ikhebula le-USB alisebenzi kahle
Esinye sezinyathelo zokuqala okufanele uzihlole ukuthi ngabe kukhona okuthile komzimba okunephutha ezinyathelweni. Kubukeka kuyisiphukuphuku, kepha ezikhathini eziningi - ikakhulukazi uma sikhuluma ngamashaji webhethri - ikhebula esizama ukondla nokufunda idatha alisebenzi. Ukuze, zama ukuxhuma le hard disk kwenye ikhompyutha bese ukhipha isinqumo sokuthi ikhebula le-USB yinto ehlulekayo. Siyaqonda ukuthi uma kuyinkumbulo ye-USB, lesi sinyathelo kumele seqiwe.
Izinketho zokudlulisa izithombe kusuka kudivayisi ye-Android ziye kwi-Mac
Awunakho ukuboniswa kwamadrayivu angaphandle ku-Finder okunikwe amandla
Uxhuma i-hard drive yangaphandle noma imemori ye-USB bese ubheka ukuthi iyawathola yini amandla ngoba ama-LED akhomba ayasebenza. Ngaphambi kokuqhubeka nesinyathelo esilandelayo, kungcono ukuqinisekisa ukuthi iMac iyayibona ngempela idivayisi. Ngakho-ke ngalokhu siya ku- «Finder», siya kubha yemenyu futhi sinesifiso senketho ethi «Go». Ngemuva kwalokho simaka inketho «Iya kufolda ...» kanye ne- Ebhokisini lebhokisi elivelayo kufanele sibhale okulandelayo:
/ Amavolumu /
Uma ibuyisa imiphumela futhi i-hard drive yethu yangaphandle noma imemori ye-USB ivela esibukweni, isizathu sokuthi ungaziboni esibukweni yilokhu esikutshela khona ngezansi.
Esinye isizathu sokuthi kungani kungenzeki ukuthi ubone noma yini kusuka kuzinto zokugcina zangaphandle ku-Mac yakho ukuthi awunanketho efanelekile ekhethwe kusistimu yakho. Sisho ukuthini ngalokhu? Kulungile ukwenziwa kusebenze kokuncamelayo kwe-Finder naku-voila.
I-Mirror Mac Screen ku-Smart TV
Okungukuthi, chofoza ku- "Isitholi" ku-Dock. Manje iya kubha yemenyu bese uqhafaza futhi ku- "Isitholi" bese uthi ku- "Izintandokazi". Uzobona ukuthi kunamathebhu ahlukene lapho ungaluma khona. Yebo, lapha kuzoya ngokuthi ufunani njengomphumela wokugcina. Uma ufuna ukuxhuma idivayisi yakho yesitoreji sangaphandle ukuthi iboniswe kwideskithophu, iya ku- «Okuvamile» bese ukhetha izakhi ozifunayo.
Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna ukuthi ivele kubha eseceleni ye-Finder, khetha inketho «Ibha eseceleni» bese umaka izinketho ofuna ukuboniswa kusigaba se- «Amadivayisi».
Setha kabusha iSystem Management Control (SMC)
Ekugcineni, uma kungekho kulezi zixazululo ezingenhla ezikusebenzele, kungahle kube yisikhathi soku setha kabusha isilawuli sokuphatha uhlelo, eyaziwa nangokuthi yi-SMC. Ngalesi sinyathelo kungenzeka ukuthi senze iMac yethu isebenze futhi ezimeni. Yize ekhasini lokusekelwa le-Apple unezinyathelo zonke ngokuya ngohlobo lwemishini onayo, evela kwaSoy de Mas sibathuthukisa ngezansi:
Ama-laptops e-MacBook (MacBook Air, MacBook, MacBook Pro) ngaphandle kwebhethri elikhishwayo:
Khetha imenyu ye-Apple> Cisha
Ngemuva kokuthi i-Mac yakho icishe, cindezela izinkinobho ze-Shift-Control-Option ohlangothini lwesobunxele lekhibhodi ehlanganisiwe, bese ngasikhathi sinye ucindezela inkinobho yamandla. Bamba phansi lezi zinkinobho nenkinobho yamandla amasekhondi ayi-10
Cindezela inkinobho yamandla futhi ukuvula iMac
Ama-desktops afana ne-iMac, Mac Mini, Mac Pro:
Ngemuva kokuthi iMac yakho ivaliwe, khipha intambo yamandla
Linda imizuzwana engu-15
Phinda uxhume intambo yamandla
Linda imizuzwana emihlanu, bese ucindezela inkinobho yamandla futhi ukuqala iMac yakho
iMac Pro (izinyathelo ezahlukahlukene kwi-iMac ejwayelekile):
Ngemuva kokuthi iMac Pro icishe, cindezela bese ubamba inkinobho yamandla imizuzwana eyisishiyagalombili
Khipha inkinobho yamandla bese ulinda imizuzwana embalwa
Cindezela inkinobho yamandla futhi ukuvula iMac Pro
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Okufanele ukwenze uma i-Mac yakho ingaboni i-hard drive yangaphandle
Sawubona, ngifomathe i-hard disk kusuka kumawindi 7 ane-MACDRIVE 9 Pro, kepha lapho ngiyifaka ku-Imac G5 (endala kakhulu i-OS X Tiger) bese ngisebenzisa i-disk yokufaka kubonakala sengathi izosebenza, kepha ngemuva kwesikhashana ithola indilinga maphakathi kwesikrini ngomugqa ohlanganisiwe. Ingabe i-hard drive ifomathiwe ayilungile? noma yini eshodayo?
i-noe breton kusho
sawubona nginombuzo ngimusha kule mac pro noma i-apula futhi umbuzo wami uthi; Ngine-mac pro 2015 futhi ngifuna ukuyisebenzisa ku-dj futhi inkinga ukuthi ngine-usb disk engaphandle futhi uma ngiyixhuma ngiyifaka ekudlaleni, angiwatholi amavidiyo wezingoma, akukho okunye okuzayo ngaphandle komsindo futhi ayikho ividiyo, ngiyethemba uyangizwa ngiyabonga
Phendula ku-noe breton
Sawubona kube wusizo kimi, benginenkinga nge-USB engasebenzi bengicabanga ukuthi yi-USB ngize ngifunde le ndatshana, ngiyabonga kakhulu! Ngithole nohlelo laphaya olwalusizo kakhulu kimi ukuqeda amagciwane kanye nalezo zinto ezicasulayo ezaziphuma ngezikhathi ezithile, adwcleaner ibizwa.
Dala amasiginesha e-HTML ngayo yonke imininingwane yakho yokuxhumana nge-imeyili Isiginesha Engenamkhawulo
I-Apple ifaka imali yokuqala eyizigidi ezingama-1.500 yenhlawulo ye-Ireland